Guddiga Fulinta - SEIU6
Xubinta Guddiga Fulinta
Akhri taariikh nololeedka
Amir Kalabic wuxuu yimid Maraykanka kana soo haajiray Bosnia sannadkii 2005-tii, halkaas oo uu uga soo shaqeeyay sarkaal boolis ahaan. Isaga oo 15 sano ka shaqaynayey nadiifiye, Amir wuxuu xubin firfircoon ka noqday midowgeena markii uu fahmay in shaqaalaha oo isku yimaada ay faa’iido ka keeni karaan mushaharada, dheefaha iyo wax ka qabashada arrimaha shaqada qaab uusan shaqaale kasta shaqsi ahaantiisa uga keeni karin. Amir wuxuu aaminsan yahay in shaqaalaha ay ka ag dhawaadaan midowgooda gaar ahaan maadaama uu COVID waqti walaac badan u abuuray shaqaalaha lagama maarmaarka ah, mar kalena uu caddeeyay in shirkadaha ay isku dayi doonaan inay dib u jaraan xuquuqaha iyo faa’iidooyinka shaqaalaha. Wakiilka midowga ahaan, Amir wuxuu jecel yahay inuu soo farageliyo isaga oo matalay shaqaalaha kale ee la shaqeeya. “Markaad caawiso qof awood yar, xitaa si yar, isaga waxay u noqonaysaa wax weyn. Waligiis ma iloobi doono.”
Xubinta Guddiga Fulinta ee Hawlgabay ee Daaroorka Badan
Bruce Berkbigler waa xubin ka tirsan guddiga fulinta iyo abaabulaha guud ee Dadka Hawlgabka ee Shaqeeya ee SEIU6. Sarkaal amni oo muddo dheer shaqaynayay oo ilaalinayey Columbia Tower, Bruce wuxuu gacan ka geystay bilaabida abaabulka ugu horreeya ee saraakiisha amniga ee Seattle. Bruce wuxuu ku dhashay Florida, wuxuu ku koray Missouri, wuxuuna ku koriyay qoyskiisa Seattle, oo ay ku jiraan 3 caruur ah. U dhaqdhaqaaqe muddo dheer, Bruce wuxuu aad u jecel yahay shaqaalaha inay helaan qaybtooda cadaalada ah, oo uu ku niro daryeelka caafimaadka.
“Midowyada waxay si gaar ah muhiim ugu yihiin shaqaalaha qandaraasleyda ah. Dhammaan shaqaalaha waa inay helaan waxay u baahan yihiin si ay ugu noolaadaan nolol caafimaad leh.”
Xubinta aan Hawlgabka Ahayn ee Daaroorka Kala Duwan
Waxaan ahay Carlos Villa Trujillo oo waxaan ka soo haajiray Mexico 33 sano ka hor. Waxaan ahay aabbe dhalay saddex carruur ah oo qurux badan. Aad ayaan u dadaalaa si aan u taageero qoyskayga oo aan xaqiijyo inay helaan fursado aan aniga horay u helin. Waxaan ahaa nadiifiye Ilaa iyo 8 sano hadda. Waxa aan bilaabay inaan door firfircoon ka qaato midowgeena kadib markii aan u kuur galay sida shaqaalaha nadiifiyeyaasha ah loogula dhaqmo goobaha shaqada oo aan mushahar loo siinin, gaar ahaan iyada oo sabab looga dhigayo inay soo galooti yihiin oo Ingiriisigu aanu ahayn luuqadooda koowaad. Midowgeena waxa uu i baray xuquuqdeyda wuxuuna ii awood siiyay inaysan dib danbe loo-shaqeeyayaashu iiga faa’iidaysanin. Had iyo jeer waxaan ku dhiirigeliyaa shaqaalaaha aan isla shaqayno inay ka qaybqaataan si aan u wanaajino xaaladaha shaqadeena.
Charles Pannell waa xubnaha Guddiga fulinta ee sharfan. Wuxuu u shaqaynayay nadiifiye ahaan wax ka badan 30 sano ka hor inta uusan hawlgabin. Muddadii uu shaqada ku jiray, waxa wuxuu soo wakiil midow wuxuuna ka caawiyay dadki ay wada shaqaynayeen in ay helaan matalaad iyo sidoo kale fahamka xuquuqahooda. Sidoo kale waa nin u dhaqdhaqaaqa shaqada wuxuuna abaabulay oo ka qaybqaatay mudahaardyo shaqo joojin oo horseeday in la wanaajiyo xaaladda shaqada. Waa nin xaaskiisa jecel oo daryeele u ah carruurta uu awoowaha u yahay.
Chung Wong wuxuu ka soo haajiray Hong Kong sanadkii 2001. Waa aabe dhalay labo carruur ah. Wuxuu kaga shaqaynayay nadiifiye ahaan goobta uu hadda joogo muddo 20 sano. Wuxuu ahaa wakiilka midowga laga soo bilaabo 2007. Wuxuu marki ugu koowaad soo galay midowgeena ka dib markii uu helay wargayska SEIU6, kaas oo ku qalqaaliyay inuu aad uga qayb qaato si uu wax uga qabto arrimaha ay wajahayeen kuwa la shaqeeyo wakhtigaas. Wuxuu ka mid ahaa Guddiga Fulinta muddo 5 sano ah. Marka uusan shaqaynaynin, wuxuu ku helaa inuu ciyaarida badminton iyo heesida.
Demetrus wuxuu ku jiray shirkadda ammaanka in ka badan 15 sano isaga oo la shaqeynayay Star Protection Agency. Kahor inta uusan noqonin sarkaal amni, Demetrus wuxuu qayb ka ahaa Barnaamijka Tabbabarka Bilayska ee Dhalinta ee Waaxda Bilayska ee Seattle, halkaas oo uu ku bartay xeeladaha bilayska ee uu u isticmaalo shikadda amniga. Demetrus wuxuu ka mid ahaa kooxdii SEIU6 ee ka shaqaysay in la nidaamiyo amniga Seattle, iyo in ay ku guulaystaan qandaraaskoodii ugu horeeyay. Wuxuu ka mid ahaa labo koox oo kuwa gorgortanka ah wuxuuna xubin ka yahay guddiga siyaasadda, wuxuuna aaminsan yahay inay muhiim tahay in midowga laga sii shaqeeyo. Demetrus waa taageere isboortiga aad u xiiseeya oo jecel Seahawks, Mariners, Sounders iyo Cougars, wuxuuna sugi la’yahay inta ay Kraken ka bilaabayso inay ciyaarta. Demetrus iyo xaaskiisa waxay wadaagaan afar gabdhood, Serenity, Hannah, Isabel iyo Xayvion. Waxay degan yihiin Kent.
Elsa Ogbe waa madaxweyne ku xigeenka ahna agaasimaha abaabulka gudaha ee SEIU6. Elsa waxay u dalacday hoggaanka midowga ka dib markii ay door muhiim ah ka ciyaartay Dagaalkii ugu horreeyay ee qaranka ee ololihii $15 ee garoonka diyaaradaha Sea-Tac, kadibna waxay ahayd qabanqaabiyaha guud ee shaqaalaha adeegga rakaabka ee garoonka diyaaradaaha ee midowgeena muddo ku dhow 10 sano. Iyada oo asal ahaan ka timid Itoobiya, Elsa waxay jeceshahay in shaqadeeda ay kor u qaado qoysaska soogalootiga ah ee degmada King. Marka aysan shaqo haynin, Elsa waxay jeceshahay inay waqti la qaadato qoyskeeda, asxaabteeda iyo bulshada.
Isela Morales wuxuu ahaa wakiilka midowga laga soo bilaabo 2011. Waxay bilowday inay ka qaadato midowga waajibaadkiisa ilaalinta shaqaalaha aawadiis. Waxay asal ahaan ka timid Mexico, waana hooyo dhashay saddex carruur ah oo qurux badan. Waxay ku faantaa inay carruurteeda hawlo la qabato wakhtiga ay firaaqada tahay. Iyada oo ka helaysay midowga waxay kororsatay aqoon ballaaran oo ku saabsan xuquuqaheeda shaqaale ahaan marka laga soo tago arrimaha bulshada/siyaasaadda.
Jasmine Bell waxay ku dhalatay kuna kortay Seattle. Waxay shahaadada koowaad ee jaamacadda ka haysataa Caddaaladda Dambiyada (Criminal Justice) oo ay ka qaadatay Washington State University ee Pullman. Waxay aad u jeceshahay caddaaladda dembiyada, iyo awooddeeda inay ka caawiso midowga shaqaalaha inay cod yeeshaan. Waxay aaminsan tahay in ay jiraan arrimo ku saabsan cadaaladda bulshada oo maalin walba soo wajaha bulshadeena, loona baahan yahay isbeddel. Waxay la shaqaynaysay Allied Universal sarkaal amni ahaan laga soo bilaabo 2017. Waqtiga ay firaaqada leedahay, waxay jeceshahay inay la joogto qoyska iyo asxaabta, inay jimicsi samayso, iyo inay ku raaxaysato qaar ka mid ah muusiga hore iyo kuwa cusub. Mustaqbalka, waxay rajaynaysaa inay ka shaqeyso adeegga dawladda. “Fadlan ha ka baqin inaad hadasho haddii ay dhibaato ku haysato. Waxaad leedahay awood cod, adeegso.”
Xoghayaha ahna Khasnajiga
Xoghayaha ahna khasnajiga Jorge Dueñas wuxuu asal ahaan ka yimid Mexico, halkaas oo uu ku lahaa ganacsigi. Markay ahayd 1990-aadkii, Jorge waxa uu soo galay Maraykanka si uu nolol cusub ula bilaabo lammaanihiisa. Wuxuu ahaa nadiifiye huteel isaga oo baranaya Ingiriisiga wuxuuna ka noqday isuduwaha gudbinta hay’ad samafal oo bixisa daryeel caafimaad. U hadlida shaqaalaha ay wada shaqeeyaan ee dhibaataynta galmada kala kulmay shaqada ayaa ku dhiirigelisay inuu ka noqdo wakiil midowgiisa, u dhaqdhaqaaqiisana wuxuu boos kaga helay SEIU6, halkaas oo uu ka shaqeeynayay in ka badan 20 sano.
“Hiigsigaygu waa inaan ka dhigo midowgan mid xooggan aniga oo qaadanaya tignoolajiyada cusub iyo habab kala duwan oo loo abaabulo loo difaaco loona ilaaliyo shaqaalaha. Waxaa jira tacaddi badan oo loo gaysto shaqaalaha shirkadaheena. Markaad ku cusub tahay Maraykanka, waxay u qaadanayaan inaadan waxba haysan. Waxaan aaminsanahay inuu hogaan saxda ah noo joogo SEIU6 sababtoo ah waxaan haysanaa dhalinyaro nagu hogaaminaysa mustaqbalka.”
U ollolaynta midowga ee Lalesa Gurmessa waxay bilaabatay 13 sano ka hor, mar isaga iyo shaqaalaha kale ee wada shaqeeyaan ay arrimo kala dhaxeeyeen kormeere oo ay xal u heleen iyagoo la kaashanaya SEIU6. Lalesa waxa uu noqday wakiil midow 2012-ki wuxuuna wali ku matalaa shaqaalaha kale ee la shaqeeya magaalada hoose ee Seattle. Lalesa waa aabe jacel oo dhalay laba caruur ah wuxuuna daacad u yahay qoyskiisa. Asal ahaan wuxuu ka soo haajiray Itoobiya, waxa uuna Mareykanka ku sugan yahay 18 sano. Marka uusan shaqo haynin, wuxuu jecel yahay inuu ciyaaro kubbadda cagta. Wuxuu damacsan yahay inuu guul ka gaaro ganacsiga, nolosha iyo waxbarashada.
“Waxaan si adag u aaminsanahay in shaqaale ahaan aan u baahannahay inaan yeealno xiriirro xooggan si aan si wadajir ah ula dagaallano takoorka, dhibaateynta iyo arrimaha culeyska shaqada ee goobta shaqada. Waxaan dadka ku dhiirigelinayaa inay la xiriiraan wakiiladooda midowga haddii ay la kulmaan arrimo. Xusuusnow inaadan keligaa ahayn.”
Makda Redae waa xubin ka tirsan midowga oo ku faanta soona noqotay wakiilka midowga iyada oo u doodaysa shaqaalaha la shaqeeya inay helaan xaalado shaqo oo ka wanaagsan. Muddadii ay xilka haysay, waxa ay xubin ka ahayd kooxda gorgortanka ee horseeday heshiiska nadiifiyeyaasha ee hogaanka u qabtay shirkadda. Makda waxa ay qiratay in xiisaha ay u leedahay waxbaridda shaqaalaha ay wada shaqaynayeen intii uu dagaalku socday uu ahaa in ay xaqiiqsato in taladeeda ay ka caawin doonto 4,000 qoys inay helaan mushahar iyo dheefo ka wanaagsan. Xubin muddo dheer ka mid ahayd midowga ahaan, waxaa lagu casuumay inay hadasho xuska dabaaldegga guusha heshiiska Nadiifiyeyaasha ee 2021.
Maria Gamiz waxay asal ahaan ka timid Mexico. Waxay hooyo iyo ayeeyo u tahay laba carruur ah oo qurux badan. Waxay ka heshaa inay waqti kula qaadato qoyskeeda guriga iyo qoob ka ciyaarka. Waxay bilawday inay aad uga qaybqaadato midowgeena ka dib markay xaadirtay kulamada bilaha ah. Shaqaalaha ay la shaqayso dhexdooda waxay ka ahayd qof mas’uul ah marka la eego inay muddada ugu dheer halkaas ka shaqaynaysa waxayna kalsooni u siiyeen inay noqoto wakiilkooda midowga. Waxaa sharaf u ahyd in ay ugu adeegto xilkaas in ka badan 10 sano, gaar ahaan wakhtiyo aad u adag sida weerarkii xabadaha ee suuqa oo runtii saameeyay ammaankooda iyo fayo-qabkooda dhaqaale ahaan iyaga nadiifiyeyaasha suuqa ahaan. Iyada iyo shaqaalaha ay wada shaqeeyaan waxay awoodeen inay midoobaan oo ay xal u helaan arrimaha jadwalka iyo eexashada goobta shaqada sannadihii la soo dhaafay. Si se puede!
Rob Lund wuxuu ka soo shaqeeyay oo uu ahaa sarkaal amni tan iyo 2009-kii, wuxuuna hormuud ka ahaa abaabulka saraakiisha amniga iyo ku guuleysiga heshiisyo xooggan dhowrkii sano ee la soo dhaafay. Rob wuxuu ku raaxaystaa doorkiisa hogaamiye SEIU6 ahaan taas oo ay sabab tahay bulshada isku imaanaysa si ay ugu dagaallamaan xuquuqaha shaqaalaha iyo si ay iskuugu dheelitiraan awoodda u dhaxaysa shaqaalaha iyo madaxda.
“Shirkadda ammaanka ayaa si wayn ugu kobcaya oo aad ugu koraya suuqa Seattle. Waxaan u baahannahay taageerada shaqaalaha si aan u xaqiijino inaan helno qaybteena caddaaladda ah maaddaama shirkadahani ay korayaan si saraakiisha aysan u noqon kuwo aan la arki karin.”
Saba Belachew waxay soo gashay Maraykanka 2008 waxayna ka timid Itoobiya. Isla markii ay timid waxay ka shaqo bilowday garoonka diyaaradaha ee Seatac iyada oo noqotay wakiil midow oo dadaal badan. Waxay qayb ka ahayd dagaalkii qiimaha badnaa ee ololihii $15 ee lagu doonayay in lagu kordhiyo mushaharka saacaddii. Saba waa xaas faraxsan iyo hooyo dhashay 2 caruur ah. Marka aysan shaqo haynin, Saba waxay caawimaad ku bixisaa hoyga iyada oo ku quudisa dadka hoylaawayaasha ah barnaamijkeeda kaniisadda. Waxay sidoo kale si is-xilqaan ah ugu shaqeysaa daryeelka dadka waayeelka ah waxayna ka caawisaa muhaajiriinta cusub sidii ay ula qabsan lahaayeen markay yimaadaan.
Magacaygu waa Tulu Dinagde, waxaana asal ahaan ka imid Itoobiya. Waxaan muddo dheer ka mid ahaa ciidanka militariga ka hor inta aanan u soo haajirin dhawr waddan oo Afrikaan ah oo aan ugu dambayn degin Ameerika. Waxaan ahaa nadiifiye Ilaa iyo 20 sano. Shaqadu way adkaan kartaa maadaama ay ku lug leedahay in fiiro gaar ah loo yeesho wax walba iyo shaqo badan oo adag, balse waxay isiisaa mushahar—gaar ahaan maadaama aan ahay aabe sharaf leh oo leh toddoba caruur ah. Had iyo jeer waxaan ku lug lahaa midowga. Xitaa waxaa mar la iiga aargoostay inaan baray shaqaalaha aan wada shaqayn jiray xuquuqahooda shaqada. Waxaan ugu adeegaa sidii wakiil midowga ahaan dadka ila shaqeeya. Waxaan si wayn u aaminsanahay in dhammaanteen aynu mudannahay mushahar wanaagsan oo ay tahay in si caddaalad ah na loola dhaqmo. Waxaan aaminsanahay dadka waxayna ila tahay inaan isbedel keeni karno haddii aan midowno.
Zenia Javalera waa madaxwaynaha SEIU6. Iyada oo qabanqaabiye ahayd muddo dheer, Zenia waxay u dalacday hoggaaminta midowgeeda iyada ku dhiirugelinaysa xubnaha inay tallaabo siyaasadeed qaadaan si ay wax ugu qabtaan arrinta culayska shaqada xad-dhaafka ah, taas oo dhibaato wayn ku ah shirkadda nadiifiyeyaasha ee ilaa iyo maanta. Zenia waa aasaasaha Guddiga Haweenka ee SEIU6, oo ka shaqeeya takoorka jinsiyada ku salaysan ee goobta shaqada iyo ka shishe. Iyada oo ah gabadh ay dhaleen aabe beer ka shaqeeya iyo hooyo maamule caafimaad ah oo timid Seattle kana timid Mexico, Zenia waxay marqaati ka noqotay caqabadaha ay qoysaska soogalootiga ahi la kulmaan maalin kasta. Iyada oo lagu dadaalayo caddaaladda jinsiyadda, xuquuqaha soogalootiga iyo xuquuqaha haweenka, Zenia waxay hoggaamisaa SEIU6 oo ah midow awoodsiiya shaqaalaha si loogu abuuro bulshooyin caafimaad qaba dhammaanteen.